6 आउने छुट्टिहरूको लागि तपाइँको वेबसाइट कसरी तयारी गर्ने भनेर Semalt बाट तरिकाहरू
यो वर्ष हामी एक लामो समय को लागि हाम्रो दिमाग र हृदय मा रहन छ कि एक भएको छ। जे होस्, चाडको मौसम कुनामा सहि छ। यसले हामीलाई वर्षको सबै याद गरेका सबै रमाइलो गतिविधिहरू समात्न अद्वितीय अवसर प्रदान गर्दछ। साथीहरूलाई भेट्नुहोस् र पुन: कनेक्ट गर्नुहोस्। उपहार, साथै मुस्कानको आदान प्रदान गर्नुहोस्।
यस लेखमा, Semalt तपाइँ तपाइँको साइट, तपाइँको डोमेन नाम, र छुट्टी मौसम को व्यस्त मागहरु संग आउने कुनै पनि समस्या रोक्न को लागी केहि सुझावहरु लागू गर्न सक्नुहुन्छ कसरी देखाउँदै। हामी धेरै अर्डरहरूको साथ बर्षको त्यो समयमा प्रवेश गर्दैछौं। चिन्ता नलिनुहोस्; तपाइँको वेबसाइटमा नयाँ र प्रमुख पृष्ठहरू लिन र खोजी ईन्जिनहरूमा रँक लिन ढिला भइसकेको छैन। सबै पछि, तपाईं ती हल्का त्रुटिहरू र गल्तीहरू छोड्न चाहनुहुन्न SERP मा तपाईंको रैंकिंगको संभावनाहरू नष्ट गर्न। यदि तपाईं त्यस्ता अप्टिमाइजेसन सुविधाहरू रहनको लागि अनुमति दिनुहुन्छ भने, सम्भावना यो छ कि त्यसले तपाईंको साइटलाई चोट पुर्‍याउने छ, यो क्रमबद्ध, र ट्राफिक।
उत्सव सत्रहरूको लागि तयारी गर्ने एउटा उत्तम तरिका वेबसाइट एसईओ अडिट गर्नु पहिले हो। यसले तपाइँलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ कि तपाइँ केहि सामग्री परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, तपाइँको साइट संरचना मा काम, नयाँ सामग्री जोड्नुहोस्, र अधिक। धेरै वेबसाइटहरू बुझ्न असफल हुन्छन् कि तपाईं पहिले यो आफ्नो अफ-सीजनमा गर्नुभयो, तपाईंको लागि उत्तम छ।
धेरै पटक, उत्सवहरू सुरू हुनको लागि कुर्दै र तपाईंको वेबसाइट परिमार्जन गर्नु उत्तम रणनीति होइन। बर्षको यस समय अझै पनि हाम्रो पात्रो मा "सुरक्षित" समय सीमा अन्तर्गत पर्दछ। किनभने व्यस्त छुट्टीको मौसम सुरु हुनु अघि यसले पर्याप्त ठाउँ दिन्छ।
तपाईंलाई परिवर्तनहरू गर्न मद्दतको लागि, यी परिवर्तनहरूसँग सामना गर्नुहोस्, र अन्वेषण गर्नुहोस् कि यि परिवर्तनहरू लागू गर्न कतिको समय लाग्दछ र तपाईंलाई कार्यान्वयन गर्न किन सुरक्षित छ। यसले मद्दत गर्दछ यदि तपाईंले यो याद राख्नुभयो कि तपाईंको प्राथमिक उद्देश्य ट्राफिक प्राप्त गर्नु हो, यसलाई नहटाउनुहोस्। तपाईं आफ्नो खोज ईन्जिन रैंकिंग, दृश्यता, वा सुरक्षा यो आउँछ कि गुमाउन छैन।
त्यहाँ यी कार्यहरूको लागि कुनै विशेष अनुक्रम छैन। सामान्य रूपमा, त्यहाँ चार व्यापक कोटीहरू छन्: तपाई अवलोकन/संशोधित गर्दै हुनुहुन्छ:
त्रुटिहरू/मुद्दाहरूको पहिचान गर्नुहोस् र समाधान गर्नुहोस्
तपाईंको हराएको यातायात र लिंकहरू पुन: प्राप्ति गर्दै
ईमेल डेलिभरेबिलिटी सुधार गर्दै
तपाईंको वेबसाइट र डोमेन नामको सुरक्षालाई सुदृढ गर्दै
वेबसाइट त्रुटिहरू र मुद्दाहरूको पहिचान र फिक्सिंग
आशा छ कि तपाईंको वेबसाइटले गतिविधिहरूको संख्यामा वृद्धि अनुभव गर्दछ, तपाईं पक्का हुन चाहनुहुन्छ कि तपाईंको वेबसाइटमा कुनै समस्या वा त्रुटिहरू छैनन्। छुट्टीको तयारीको क्रममा गर्नको लागि एउटा राम्रो र सुरक्षित कुरा भनेको तपाईंको वेबसाइटमा अवस्थित त्रुटिहरू वा अन्य मुद्दाहरूको समाधान गर्ने काम गर्नु हो।
सामान्यतया, तपाईले आफ्नो वेबसाइटको क्रलमा हेरेर सुरू गर्न चाहानुहुन्छ। वेबसाइट क्रॉलरहरू यो विश्लेषण चलाउनको लागि उत्तम तरिका हो। केहि अद्भुत क्रॉलरहरू ओनक्रल, साइटेलर, डीप क्रोलर, चिच्याउने फ्रुग एसईओ माकुरो हो, केहि नामहरूको लागि।
यी मध्ये एक वा केहि उपकरणहरूको प्रयोगले तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइटमा अवस्थित केही प्रकारका मुद्दाहरूको पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ, र तपाईंलाई के ठीक गर्ने बारे जान्न सक्नुहुन्छ। यो यस तरीकाले सोच्नुहोस्: यी उपकरणहरूले तपाईंलाई सामान्य साइट मर्मतसम्भार गर्न मद्दत गर्दछ। तपाइँको वेबसाइट को लागी तपाइँको दर्शकहरु लाई चिकनी र निर्दोष अनुभव प्रदान गर्न को लागी सक्षम हुनु पर्छ। त्रुटिले भरिएको वेबसाइट हुनु, typos, वा भाँचिएको लिंक र छविहरू तपाईंको व्यवसायको लागि भयानक हुनेछ। यसले केवल खराब प्रयोगकर्ता अनुभवहरूमा नेतृत्व गर्दैन, तर यसले तपाईंको वेबसाइट रैंकिंगलाई पनि चोट पुर्‍याउन सक्छ।
त्रुटिहरू कसरी पहिचान गर्ने र फिक्स गर्ने
१. त्रुटिहरु खोज्नुहोस्
केही सामान्य वेबसाइट त्रुटिहरूमा समावेश:
यो कार्य गर्नको लागि कुनै गाह्रो प्रयास छैन, र तपाइँ तपाइँको वेबसाइटलाई कुनै पनि अधिक हानि गर्ने जोखिम छैन। तपाईं केवल वेबसाइट मा प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्दै हुनुहुन्छ। वेब क्रॉलरहरू प्रयोग गरेर, तपाईं सजिलै आफ्नो वेबसाइटमा साधारण त्रुटिहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
उदाहरणको लागि, केहि त्रुटिहरू जुन तपाईं फेला पार्न सक्नुहुन्छ:
बहु पृष्ठहरूमा समान शीर्षक ट्यागहरू
पृष्ठहरूमा बहु H1 ट्यागहरू
धेरै लामो शीर्षक ट्यागहरू
यी सामान्य त्रुटिहरू र साइट मर्मतसम्भारजस्ता छन् हामीले तपाईंलाई राम्रो प्रदर्शन गर्न भनिरहेका छौं किनकी ती तपाईंलाई यस्ता साना गल्तीहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्छन्। यी गल्तीहरू परिवर्तन गरेर वा सुधार गरेर तपाईं कुनै ट्राफिक गुमाउने जोखिम लिनुहुन्न, त्यसैले तपाईं केवल आफ्नो साइट सुधार गर्दै हुनुहुन्छ, अरू केहि पनि छैन।
२. गुगल खोज कन्सोल र बिंग वेबमास्टर उपकरणहरूमा त्रुटिहरू खोज्नुहोस्।
यो काम धेरै गाह्रो छैन; यद्यपि सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न ज्ञानको स्तर चाहिन्छ। जब तपाइँको खोज इञ्जिनले केहि त्रुटिहरू औंल्याउँछ, यो सुरक्षित छ कि तपाइँ तिनीहरूलाई हल गर्नुहुन्छ। तपाई गुगल खोजी कन्सोल र बिंग वेबमास्टर उपकरणमा विभिन्न आईटमहरू समीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ जुन बाहिर देखाइएको छ। हालसालै, हामीले संरचनात्मक डेटाको बढ्दो संख्यामा ध्यान दियौं, र यी त्रुटिहरू छन् जुन सजीलै फिक्स गरिएको छैन। यदि तपाईंको संरचित डाटा मुद्दामा पृष्ठहरू धेरै समावेश छन् वा डाटाबेसबाट डाटा खींचिएको छ भने। त्यस्ता त्रुटिहरूको लागि तपाईलाई वेब विकासकर्ताको आवश्यक पर्दछ; यदि समस्या यो हो कि तपाईंले संरचित डाटाबाट कोड प्रतिलिपि गरेर टाँस गर्नुभयो भने, यो सजिलो हुन्छ।
त्रुटि खोज ईन्जिनहरूलाई औँल्याउनु महत्त्वपूर्ण छ। एकचोटि पहिचान भएपछि, तपाईं तिनीहरूलाई सच्याउन सक्नुहुनेछ किनभने यसले केवल तपाईंको वेबसाइट सुधार गर्न सक्छ। यदि तपाईं ई-वाणिज्य साइट चलाउनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो संरचित डाटा मुद्दाहरू ठीक गर्न अझ सक्रिय हुनुपर्छ, किनकि यसले तपाईंको सामग्रीको दृश्यता र SERP मा तपाईंको क्रमबद्धतालाई असर गर्न सक्छ।
यदि तपाईंले यी त्रुटिहरू फेला पार्नुभयो र तिनीहरूलाई ठीक गर्नुभयो भने, यसले केवल तपाईंको वेबसाइटलाई राम्रो गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंको बिक्री रूपान्तरण सुधार गर्दछ।
Your. तपाईको इ-मेल वितरणयोग्यता सुधार गर्ने
ईमेल मार्केटिंग एक प्रभावकारी तरीका हो तपाईंको श्रोतालाई तपाईंको पछाडि थाहा दिनुहोस्। वेबसाइटहरू जसले लकडाउन्डहरू मार्फत सबै काम रोक्नका लागि, यसले तपाईंलाई तपाईंको ग्राहकहरूलाई सूचित गर्ने उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्दछ जुन तपाईं पछाडि फर्कनुभयो र तपाईंको प्रदर्शनमा नयाँ उत्पादहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्।
ईमेल डिलिरेबिलिटी आवश्यक छ, विशेष गरी जब तपाईंको डोमेन नामबाट पठाइन्छ र सफलतापूर्वक प्रापकलाई डेलिभर गर्दछ जुन उपयोगी छ। एकचोटि तपाईले कुनै सम्भावित ग्राहकलाई ईमेल पठाउनु भयो भने, निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूले इ-मेल प्राप्त गरे। यदि यो कहिले सम्म उनीहरूको इनबक्समा जान सक्तैन भने, तपाईले ईमेल मार्केटिंगमा आफ्नो भाग गरेको दावी गर्न सक्नुहुन्न। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्ना ईमेलहरू डेलिभर गर्न सुनिश्चित गर्नु भयो।
तपाईको इ-मेल मार्केटिंग रणनीतिले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर सुनिश्चित गर्न, त्यहाँ सेटिंग्सहरू छन् तपाई अहिले नै जाँच गर्न सक्नुहुनेछ कि सबै कुरा ठीकसँग काम गरिरहेको छ भनेर। तपाईंको ईमेलको सामग्रीको कारण, यो अझै तपाईंको वेबसाइटको लागि सामग्री प्रमोशनको रूपमा मानिन्छ।
यहाँ सबै चीजको सुनिश्चित गर्नका लागि केहि सुझावहरू छन् जस्तो हुनुपर्दछ:
पहिले, तपाइँले सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाइँको डोमेन नाममा DMARC सेट अप गरिएको छ। धेरै स्क्यामरहरू र स्कूपरहरू क्वालिटी डोमेनबाट ईमेल सूचीहरू प्राप्त गर्न खोज्दै - यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंसँग आफ्नो डोमेनको निगरानी गरीरहेको छ।
यदि तपाईंसँग एक ईमेल सूची छ, तब तपाईंले आफ्ना ग्राहकहरूलाई हप्तामा कम्तिमा एक पटक ईमेल पठाउन जारी राख्नु पर्छ। यो गरेर, तपाईं आफ्नो कम गुणस्तरका ग्राहकहरूलाई फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ।
S. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको डोमेन नाम ईमेल सेटिंग्स सही ढ properly्गले सकिएको छ
यसको साथ, तपाईं केवल ईमेलको वितरण योग्यता सुधार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ विशेष सेटि weहरू छन् जुन हामी तपाईंको DNS (डोमेन नेम सेटिंग) बनाउने डोमेन सेटिंग्स कल गर्न मन पराउँछौं।
DNS सेटिंग्समा रेकर्ड नामक केहि प्रविष्टिहरू छन् जसले इन्टरनेट ट्राफिकलाई निर्देशन दिन्छ। उदाहरण को लागी, जब लोड गर्न को लागी एक अनुरोध छ, DNS ले ट्राफिक आईपी ठेगाना मा जान र वेबसाइट लोड गर्न आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न बताउँछ।
ईमेलको साथ, त्यहाँ एक अलग IP ठेगाना वा स्थान छ। त्यहाँ सुरक्षा प्रकारको रेकर्डहरू पनि छन् जस्तै DMARC रेकर्ड, DKIM, र SPF रेकर्डहरू थप्न आवश्यक छ।
Lost. हराएको यातायात र लिंकहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्
ओ-फेसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती मध्ये एक हो वर्षको अन्तिम क्वाटरमा हराएको यातायातको लागि संघर्ष गर्दै। यो अवसर हो जहाँ तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको ट्राफिकको आगमनलाई सुधार गर्दछ, र यसले तपाईंको वेबसाइटमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्दैन।
Your. तपाइँको पुरानो पृष्ठहरू समीक्षा गर्नुहोस् र कुनै समस्याहरू समाधान गर्नुहोस्
SERP मा तपाईंको रँकिंग प्रभावित छ यदि तपाईंसँग खराब साइटहरू छन् भने तपाईंको साइटमा पृष्ठहरू। तपाईं पृष्ठहरू फेला पार्न चाहानुहुन्छ जुन पहिले यातायात ल्याइएको थियो वा पृष्ठहरू जुन 4०4 हरू छन् र अझै पनी लिंकहरू छन्। एक ई-वाणिज्य वेबसाइट को रूप मा, तपाईं कालो शुक्रवार वा साइबर सोमबार को पुराना वेबपेजहरु पछिल्लो बर्षहरु बाट हटाउन चाहानुहुन्छ। संभावनाहरू यो हुन् कि यी पृष्ठहरू लामो समय सम्म बाँच्दैनन् र केवल अतिरिक्त तौलको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्।
हामी बुझ्दछौं कि छुट्टीको नजदीक तपाईंको वेबसाइटमा परिवर्तनहरू चिन्ताजनक हुन सक्छ। जे होस्, छुट्टिहरु लामो समय देखि स्थायी ग्राहकहरु मा साधारण आगंतुकहरु लाई रूपान्तरण गर्न को लागी एक अद्वितीय अवसर प्रदान गर्दछ। यो यति महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ तपाइँको वेबसाइट खुल्ला सिजन हुनु भन्दा पहिले नै सुरक्षित गर्नुहुन्छ। यो मद्दत गर्दछ यदि तपाईं आफ्नो डोमेन नाम सुरक्षित गर्नुहुन्छ ताकि तपाईं आफ्नो वेबसाइट हराउनु हुन्न र यसको प्रदर्शन सुधार गर्नुहुन्छ ताकि तपाईं यस मौसममा ठूलो जित्न सक्नुहुनेछ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले ठाउँमा रिकभरी उपायहरू राख्नुभएको छ यदि अप्रत्याशित घटनाहरूले तपाईंको वेबसाइटलाई तपाईंको वेबसाइटलाई यातायात गुमाउन वा तल जानबाट रोक्नको लागि प्रभाव पार्दछ।